Public Kura | » जहाँ मान्छेहरु मसला जस्तै गरी माटो खान्छन् ! जहाँ मान्छेहरु मसला जस्तै गरी माटो खान्छन् ! – Public Kura
जहाँ मान्छेहरु मसला जस्तै गरी माटो खान्छन् !
संसारका विभिन्न देशमा मानिसहरुको खानपानको शैली पनि फरक फरक छ । खाना पकाउने क्रममा मसलाको प्रयोग गर्ने चलन पनि खानपानको शैली तथा रहनसहन अनुसार फरक फरक छ । तर दुनियामा एउटा यस्तो देश छ जहाँ मानिसहरु माटोलाई नै मसलाको रुपमा प्रयोग गरेर खाने गर्दछन् ।